के तपाईको शरीर सुन्निने गर्छ ? यस्तो छ शरीर सुन्निनुको कारण र उपचार बिधि - जानीराखौ - ज्ञानविज्ञान
शरीरको कुनै भाग सुन्निनु कुनै न कुनै समस्याको संकेत हुनसक्छ । यसकारण शरीरको गतिविधिहरूमा ध्यान राख्ने र सूजनको कारण जान्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । धेरै पटक सूजनको साथ-साथै ज्वरो वा तिर्खा लाग्ने जस्ता समस्या पनि हुन्छ । यसमा विशेष ध्यान राख्नुहोस् ।
हुनतः सूजन कुनै रोग होइन तर पनि यसले रोगहरू प्रति संकेत गर्छ । शरीरको अलग-अलग भागमा सूजनले अलग-अलग समस्यालाई दर्शाउँछ । जस्तै अनुहार वा हातमा सूजन हुँदा यो मृगौला सम्बन्धित रोगको कारणले हुनसक्छ । तिघ्रा वा हातमा सूजन हुनु मुटुको समस्यालाई दर्शाउँछ र साथै पेटको सूजनले कलेजो सम्बन्धित समस्यालाई देखाउँछ । सामान्य रूपमा महिलाहरूको महिनावरीका कारणले पनि शरीरमा सूजन हुनसक्छ, जुन बिस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
सूजनलाई कम गर्नको लागि घरेलू उपचार निकै उपयोगी सावित हुन्छ । जान्नुहोस्, केही घरेलू उपचार जुन सूजन कम गर्न् सहयोगी हुन्छ ।
१- मनतातो दूधमा बेसारको मिश्रण गर्नुहोस् । यसको सेवनले चाँडै सूजन कम गर्न सकिन्छ ।
२- मनतातो पानीमा नून मिलाएर यस पानीले सेक्नुहोस् । यसको लागि कपडाको प्रयोग गर्नुहोस् ।
३- जिरा र चीनीको समान मात्रालाई लिएर पिस्नुहोस् र दिनमा3पटक यसको सेवन गर्नुहोस् ।
४- छुहराको सेवन पनि सूजनका लागि लाभदायक हुन्छ ।
५- दस ग्राम अदुवालाई पुरानो भेलीको साथमा मिलाएर थोरै-थोरै मात्रामा खानुहोस् । यसबाट पनि फाइदा हुन्छ ।
शरीरमा सोडियमको कमी भएको कसरी थाहापाउने ?
स्वस्थ शरीर नै स्वस्थ जीवनको पहिलो आधार हो । त्यसैले, स्वस्थ्य जीवन बाच्नको लागि शरीरलाई स्वस्थ राख्नु नै हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । यस दायित्वलाई पूरा गर्न हामी प्रत्येक दिन खानपानमा विशेष ध्यान दिने गर्छौ ।
यद्यपी, कहिलेकाही शरीरका लागि के ठीक , के बेठीक भन्ने थाहा नहुदाँ हामी शरीरका लागि स्वास्थ्य वर्दक खाना त खान्छौ । तर त्यस्तो खानेकुरा शरीरको लागि कम छ कि बढी छ भन्ने थाहा नपाउँदा स्वस्थ जीवनशैली तथा खानपानबारे सचेत हुदाँहुँदै पनि हामी मुधमेह, उच्च रक्तचाप, थाइराइड लगायतका अनेको दीर्घकालीन रोगको चपेटामा पर्छौ ।
यसको मुख्य कारण के हो भने खाना खादाँ होस् वा खाजा खाँदा । हामी प्राय नुनिलो खानेकुरा नै खान रुचाउँछौ । त्यस्ता खानेकुरा खानेमात्र हैन, आवश्यक परे त्यस्ता खानेकुरामा हामी माथिबाट हामी अझै धेरै नुन हाल्छौ ।
त्यस्ता खानेकुरा खादा हामीलाई सुरुमा त खासै धेरै नुन खाए जस्तो अनुभव हुँदैन । तर, दीर्घकालीन रुपमा त्यसले स्वास्थ्यमा भने गम्भीर एंव दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने गर्छ । आखिर नुन वा सोडियमको सेवनले स्वास्थ्यमा के के समस्या निम्त्याउने गर्छ ?
१. निर्णय लिने क्षमतामा कमी ल्याउँछ
धेरैलाई विश्वास नलाग्ला । तर यो सही हो, सन् २०११ मा प्रकाशित एक क्यानेडियन शोधले जनाए अनुसार ज्यादा नुनले दिमागमा समेत असर पार्छ । उक्त अध्ययनमा जनाइए अनुसार अधिक नुनको सेवन गर्ने व्यक्तिको तुलनामा कम नुनको सेवन गर्ने व्यक्तिको काम स्पष्ट थियो । अधिक नुनको सेवन गर्ने मानिसहरुमा अधिक नुनको कारण कामको गहिराई बुझेर फैसला गर्ने क्षमतामा कमी रहेको पाइएको थियो ।
२. प्यास धेरै लाग्छ
घाँटी किन तिर्खाउँछ ? प्यास लागेर । प्यास किन लाग्छ ? शरीरमा पानीको कमी भएर । अर्थात धेरै जसो मानिस तिर्खा लाग्नुमा एउटा मात्र कारण शरीरमा पानीको कमी हुनुलाई मान्ने गर्छन् । जबकी शरीरमा नुनको मात्रा धेरै भएमा पनि मानिसलाई पटक पटक प्यास लाग्ने गर्दछ । किनकी शरीरमा नुनको मात्रा धेरै भएमा शरीरले आˆनो तन्त्रबाट सोडियम निकाल्ने गर्दछ । जसका कारण हामीलाई प्यास धेरै लाग्ने गर्दछ ।
३. शरीर सुन्निन्छ
नुनले शरीर सुन्निन्छ भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो सही हो । एक दिनमात्र नुनको अधिक सेवनले पनि शरीरमा थुप्रै असर देखिने गर्छ । जसमध्य शरीर सुन्निने समस्या पनि एक हो, जसलाई चिकित्सकीय भाषामा इडिमा भनिन्छ ।
४. पत्थरीको समस्या
खानामा अधिक नुनको सेवनले मिर्गौलामा असर पार्ने गर्दछ । नुनको सेवनले पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा बढ्ने गर्छ, जस आफैमा गम्भीर समस्या हो । यसका कारण मानिसहरुलाई मिर्गौलामा पत्थरी हुने गर्छ ।
५. उच्च रक्तचापको समस्या
व्लड प्रेशर उच्च हुने व्यक्तिहरुलाई चिकित्सकहरु कम नुनको सेवन गर्न सुझाव दिने गर्छन् । किनकी आवश्यक्ता भन्दा बढी मात्रामा नुनको प्रयोगले शरीरमा उच्च रक्तचापको समस्या निम्त्याउने गर्छ । त्यतिमात्र हैन, ज्यादा नुनुको प्रयोगले पेटमा छाला पैदा हुनसक्छ । अझ जनावरमा यसले कैसर पैदा गर्ने विभिन्न अनुसन्धानहरुले समेत जनाइसकेको छ ।
गर्भाअवस्थामा पनि मिर्गौला सुन्निन्छ । यो समयमा पाठेघरमा रहेको बच्चाका कारण मुत्रथैलीमा चाप पर्दा मिर्गौला सुन्निने गर्छ । यो अवस्थामा सुन्निएको मिर्गौलालाई सामान्य मान्न सकिन्छ ।
Don't Miss it हर्रो र बर्रो खानुका फाईदा एकदम खरो, यस्ता रोगहरुसंग लड्न पनि यी दुईले मद्दत पुर्याउछ
Up Next शरीरमा पानी भएन भने के होला ? धेरै पानी पिउँदा बच्चालाई खतरा !! – महत्वपूर्ण जानकारी
के तपाइ तनावमा हुनुन्छ ? दिमागी सन्तुलनका लागी यसो गर्नुहोस्